#NABShow New York တွင်မြေပြင်ထုတ်ကုန်များဖြန့်ချိရန် Plura | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Plura #NABShow New York မှာမြေပြင်-Breaking ထုတ်ကုန်များလွှတ်ပေးရန်
Plura, ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာက high-performance ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်၏ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းနည်းများ, ဒီနှစ်မှာနှစ်ခုထုတ်ကုန်ဖြန့်ချိလိမ့်မည် NAB ပြရန် New York ကအဖြစ်အပျက်။ အဆိုပါလိုင်း-up, အလုံးစုံအသစ်အနာဂတျအထောက်အထား SFP-H ကို, Hybrid ကို Monitor စီးရီး, supporting ပါဝင်သည် ဟများထံသွားရောက်ကာထူးချွန် BLACK စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏တဲ့အဆင့် A-3 BIT OLED 224 "panel ကိုအတူပေါင်းစည်းထားတဲ့ကြော့ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ PRM-3-10G အပါအဝင် Fiber & IP ချိတ်ဆက်နှင့် PRM-24.5G စီးရီး။
အဆိုပါ SFP-H ကိုထောကျပံ့ဖို့အစွမ်းထက် H ကို / W ကို & S / W ကိုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ် coaxial 3Gb / s နဲ့ BNC I / O ဆက်သွယ်မှု, coaxial တတိယပါတီ H ကို / W ကိုဒီကုဒ်ဒါနှင့်အသစ် PIPM "Plura အိုင်ပီပလက်ဖောင်း Module" ဒီကုဒ်ဒါနှင့်အတူ "ST-2110 & ST-2022" ကုဒ်ဖြုတ် Fiber ကိုကျော် SFP I / O ဆက်သွယ်မှု, IP ကို ​​SFP + ။ အဆိုပါ PIPM module တစ်ခု SFP + 10G မြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်အိုင်ပီ interface ကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာကို formats တစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံကုဒ်နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ module ဆိုအရွယ်အစား SFP-H ကိုမော်နီတာထဲမှာပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ SFP-H ကိုမော်နီတာစီးရီး 17 ကနေစတင်မျိုးစုံအရွယ်အစားမှာ "84 အားလုံးကိုလမျးခရီး" မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
•4×4လက်ဝါးကပ်တိုင်ပွိုင့်ဖြေရှင်းချက်
• LKFS * အသံကျယ်လောင်အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း & လော့ဂ်အင်ဝင်နေပါသည်• စာတန်းထိုး (708 / 608)
•အမျိုးမျိုးသော SFP မော်ဂျူးများ
• (3) programmer ကြိုပြီးချမှတ်ထား & အခြားထင်ရှားသောအင်္ဂါရပ်များ
"Plura အမြဲလာသောအခါလိုအပ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကောင်းဆုံး tools တွေရောက်စေဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် IP ကိုကလေးမွေးစားခြင်းအများကြီးတွေ့မြင်နှင့် SFP-H ကိုစီးရီးတစ်ခုတည်း device အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူအချက်ပြမှုပုံစံများအပေါငျးတို့သ type ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် Ray Kalo ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောပါတယ် Plura အသံလွှင့်.
PRM-3-224G အပါအဝင်အားလုံးအသစ်က PRM-3G စီးရီး "အဆင့် A- 10 BIT OLED 24.5 နှင့်အတူပေါင်းစည်းထားတဲ့ကြော့ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းကမ်းလှမ်း panel ကများနှင့်ထူးချွန် BLACK စွမ်းဆောင်ရည်, HDR (High Dynamic Range) စွမ်းရည်, လုံးဝနီးပါးမရွေ့လျားမှုမှုန်ဝါးနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့ဗီဒီယိုအတွက်အလွန်မြန်ဆန်စွာတုန့်ပြန်အချိန်, 5000 ၏အမြင့်ဆနျ့ကငျြဘကယ်တင်: 1, ကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုထောင့်, ရှိသမျှကိုသင်၏နှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းတိကျမှန်ကန်အရောင်မျိုးပွားနှင့်အရည်အသွေးရုပ်ပုံကိုက်ညီမှု HD & SD ကစောင့်ကြည့် applications များ။ PRM-3G စီးရီးကိုလည်း PRM-217-3G, Plura 17 "FULL ပါဝင်သည် HD 1920 × 1080 Precision အသံလွှင့် LCD ကိုစီးရီး "အဆင့်တစ်ဦးက-10 BIT LED ကို 17 နှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည်။
PRM-224-3G အိုရုံကိုကိုးကားသောဗီဒီယိုမော်နီတာမဟုတ်ပါ; ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့ပြည့်စုံကိုကိုးကားစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ set နောက်ဆုံးပေါ် Plura အဆင့်မြင့် feature များနှင့်အတူအပြည့်အဝမှာ loading လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ "Ray Kalo ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောပါတယ် Plura အသံလွှင့်.
အားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ထုတ်ကုန်ကြည့်ဖို့ကဒီအခွင့်အလမ်းအပေါ်ထွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့ Plura အသံလွှင့် at NAB ပြရန် နယူးယောက်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမှာပြနေသည် Booth #N524။ သင်တို့သည်လည်းမှာအွန်လိုင်း Plura သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် www.plurainc.com.
Plura 86K နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အင်ဂျင်နီယာအချိန် / ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်အပါအဝင် high-performance ကို Multi-function ကိုမော်နီတာ (4 မှတက် ") ၏ကျယ်ပြန့တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ Plura ထုတ်ကုန်တစ်ခုဆုံးသောအင်္ဂါရပ်ထား, သာလွန်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောတန်ဖိုးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကိုဆက်ကပ်။ Plura core ကိုနည်းပညာအပျေါမှာတညျဆောကျအမှန်တကယ်တတ်နိုင် High-end features တွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဖြေရှင်းချက်စတူဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုမော်နီတာ, စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု timer နေရာမှာအချိန်-code ကိုပြသမှု & အချိန်-code ကို PCIecards, စမ်းသပ်မှုများနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ, ဇာတ်ကောင် / template ကိုမောင်းနှင်ဂရပ်ဖစ်မီးစက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စနစ်များကိုခရီးဆောင်ပါဝင်သည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကိုးကားစရာု့ကပ်ရေး ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကိုနယူးယောက် NAB Show ကိုနယူးယော့ NAB NAB16 nabshow Plura Plura အသံလွှင့် 2018-09-27
ယခင်: ရိုက်ကူးရေး၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကကြေညာလိုက်သည်ရုပ်မြင်သံကြား Entries များအတွက် Call
နောက်တစ်ခု: IBC 2018 - #IBCShow ၏တစ်ဦးကရော့စ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း